Nieves Herrero: "Amaghị m ka esi emepụta ihe, enwere m ike ịgwa gị ihe m nwetara" | Akwụkwọ ugbu a
Onye na-agba snow
Mgbe ị na -ajụ ajụjụ gbasara weebụ gbasara "Nieves Herrero Libros", nsonaazụ ya na -arụtụ aka n'akwụkwọ akụkọ ndị Madrilenian kacha ọhụrụ: Ụbọchị ndị ahụ na -acha anụnụ anụnụ (2019). Akụkọ akụkọ a bụ ihe ijuanya nye ụwa edemede, ma nwee echiche dị iche iche n'akụkụ ndị nkatọ. N'ime ọrụ ahụ, onye ode akwụkwọ na -ewetara anyị akụkọ ọzọ na ezigbo ndị na -eme ngagharị na nke ahụ nwere ihe mmetụ nke akụkọ ifo, nke ọ na -ebuli ụmụ nwanyị mara mma nke oge gara aga.
Akwụkwọ ọgụgụ Ọnwa ahụ gbajiri agbaji (2001) bụ nzọụkwụ mbụ Herrero batara n'akwụkwọ. Mgbe mpụta mbụ a, ndị Spanish kwetara na nyocha Olu Galicia bụrụ onye edemede mgbasa ozi. N'oge ahụ ọ sịrị: “Enweghị m nhọrọ ọ bụla, n'ihi na abụ m onye nta akụkọ. Amaghị m ka esi emepụta ihe, naanị m nwere ike ịkọ ihe m nwetara, nụ ma ọ bụ kọọrọ m ”.
1 Akwụkwọ kacha mma nke Nieves Herrero dere
1.1 Ọnwa ahụ mebiri emebi (2001)
1.2 Obi India (2010)
1.3 Ihe anya ya zoro (2013)
1.4 Dị ka a ga - asị na e nweghị echi (2015)
1.5 Ụbọchị ndị ahụ na -acha anụnụ anụnụ (2019)
2.1 Akwụkwọ ndị edemede
Akwụkwọ kacha mma nke Nieves Herrero dere
Ọnwa ahụ gbajiri agbaji (2001)
Ọ bụ akwụkwọ mbụ Nieves Herrero dere. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ dabere na ịgba alụkwaghịm nke di na nwunye onye ọka iwu Madrid, ndị ha na ha nọkọrọ afọ iri na anọ. Agbanyeghị na ọ bụ akụkọ chepụtara echepụta, enwere ọtụtụ ahụmịhe onye ode akwụkwọ n'ime ya; Banyere nke a, o kwupụtara: "... ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgwụgwọ, n'ihi na aghaghị m ịtụgharị ihe m nwere n'ime ihe ma jupụta mmetụta na ibe."
Beatriz na Arturo alụọla nwanyị wee mụọ nwa nwanyị dị afọ abụọ, Monica. N'adịghị enyo ya enyo, nwanyị ahụ achọpụta na di ya ekwesịghị ntụkwasị obi nye ya, ọnọdụ na -ebibi ya kpamkpam. Ya mere, ọ na -ekpebi itinye akwụkwọ mkpesa ịgba alụkwaghịm ozugbo wee rịọ maka njide nke obere nwa ya nwanyị. Nke a bụ ka esi egosipụta usoro nkewa na ndakpọ olileanya nke Beatriz, onye na -ahụ maka ịgbachitere onwe ya.
Ọnwa ahụ gbajiri agbaji
Obi India (2010)
Ọ bụ akụkọ ihe mere eme na akụkọ romance nke nwere protagonist a Lucas Millan. Nke a na -enwe nnukwu ihe ọghọm, ọ ga -abụrịrị na a ga -ebugharị ya ozugbo enwere ike. Ka oge imecha ịwa ahụ ahụ na -eru nso, ndị dọkịta chọtara obi nwa okorobịa ahụ. A na -eme ntinye aka na -echeghị na mmalite akụkụ ahụ ga -emetụta ndụ Lucas.
Usoro a gara nke ọma. Ma eleghị anya, mgbe nwa okorobịa ahụ na -agbake ọ na -amalite inwe ncheta na -enweghị atụ na mmetụta enweghị nghọta. N’oge na -adịghị anya, ọ chọpụtara na ihe niile jikọtara ya na obi ọ nwetara - ọ bụ nke onye America America - na maka nke a ọ ga -emerịrị ọrụ dị mkpa. N'otu oge ahụ, ọ na -adọwa n'etiti ịhụnanya abụọ, nke nwanyị nọ na ndụ ya na nke obi ya na -achọ, onye dị anya n'ebe ọ nọ.
Obi India (Nwa ọhụrụ ...
Ihe anya ya na -ezo (2013)
Ọ bụ akụkọ gbasara mmekọrịta nzuzo n'etiti Marchioness Sonsoles de Icaza na minista Ramón Serrano Suñer Nwanne Franco. Ha abụọ bụ ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke oge agha na Spain, ma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Emegharịrị akwụkwọ akụkọ ahụ ka ọ bụrụ minista na 2016, nke Telecinco na -ekesa ya na Blanca Suárez, Rubén Cortada na Charlotte Vega.
Akụkọ bidoro mgbe Carmen - ada nke ndị protagonists- na -ezute onye nta akụkọ Ana Romero, onye na -ede ihe ncheta ya. Na akụkọ ya na -akọ ka o siri chọpụta na Marquis Francisco Diez de Rivera abụghị nna ya nakwa na ọ bụ ihe metụtara nne ya na Ramón Serrano Suñer. Tụkwasị na nke a, ọ na -akọwa etu o siri mechaa hụ nwanne ya nwoke n'anya.
Mgbe ah Akụkọ ihe mere eme malitere na 1940, mgbe na nnọkọ ọha mmadụ dị elu Sonsoles maara nye onye ozi Francoist dị mkpa Ramon Serrano Suner. Ha abụọ mesmerized na ha amalite ihunanya ihunanya nzuzo. Mgbe afọ abụọ na-atọ ụtọ, asịrị nke mmekọrịta ha na-ejupụta n'okporo ụzọ Spanish, ọnọdụ nke Franco ji nkewa kewapụ nwanne nwanne ya n'ọfịs.
Ihe Na -ezobe Ha ...
dị ka a ga -asị na echi adịghị (2015)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ dabere na akụkọ ịhụnanya que dị n'etiti onye na -eme ihe nkiri Ava Gardner na onye na -achị ehi na Spain bụ Luis Miguel Dominguín. Nkata ahụ gụnyere mmekọrịta siri ike nke di na nwunye na -eduga, na mgbakwunye na nkọwa ndị ọzọ nke ndụ onwe ha. N'otu aka ahụ, egosipụtara eziokwu nke Spain n'okpuru ọchịchị aka ike Franco, ka ihe karịrị afọ iri gachara ka agha obodo biri.
Onye ama ama Ava Gardner rutere Spain ka ọ zuru ike mgbe ihe nkiri ọhụrụ ya gasịrị. Ka ọ dị ugbu a, ya na di ya nwere ọtụtụ nsogbu na ọdịda, yabụ ụbọchị ole na ole na Madrid ga -adịrị ya mma. Ọ bụ oge nke afọ mgbe ihe niile okooko osisi, ebe dị mma na -apụta njali elu nke ịhụnanya na ahuhu n'etiti onye na -eme ihe nkiri na Luis Miguel mgbe ha zutere nlele ha na nke mbụ.
Dị ka a ga - asị na enweghị ...
Ụbọchị ndị ahụ na -acha anụnụ anụnụ (2019)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ kacha ọhụrụ site n'aka onye edemede. Na ederede ọ bụ na -akọ akụkọ onye na -ede uri na onye na -ede egwuregwu Pilar de Valderrama. Nkata ahụ na -ekpughe ihe nzuzo karịrị akarị: nwanyị ahụ, n'onwe ya, bụ Guiomar, ihe ngosi nka Antonio Machado. Aha ọrụ ahụ sitere na mpekere nke uri ahụ achọtara na uwe onye Spaniard na -eyi n'ụbọchị ọ nwụrụ, nke na -agụkwa: "ụbọchị ndị a na -acha anụnụ anụnụ, anyanwụ nwata a."
Alicia Viladomat - nwa nwa Pilar kpọtụụrụ Herrera - onye chọrọ ijide ncheta nne nne ya maka ụmụ. N'ime ogologo akụkọ a, A kọwara ya ka nwa agbọghọ na -ede uri - mgbe ọ matara na ekwesịghị ntụkwasị obi di ya — kpebiri ịga njem ịhụ Machado.. Mgbe ha zutere, ha abụọ nwere njikọ miri emi, na ịhụnanya platonic ahụ kpaliri ọtụtụ abụ onye edemede.
Ụbọchị ndị ahụ na -acha anụnụ anụnụ (MAXI)
Onye nta akụkọ Spanish na onye edemede Nieves Herrero Cerezo mụrụ March 23, 1957 na Madrid. Na 1980, ọ gụchara asambodo na Journalism na Mahadum Complutense nke Madrid. Afọ iri abụọ ka e mesịrị, ọ gụsịrị akwụkwọ dị ka ọkàiwu na Mahadum Europe nke Madrid. Herrero nwere ogologo akụkọ na ụwa nke onye nta akụkọ, yana ọrụ ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 35.
Nieves Herrero kwuru okwu ya
N'oge ọrụ ya, ọ gafeela na mgbasa ozi dị iche iche, ụfọdụ n'ime ha: Antena 3 Radio, TVE, RNE, Telecinco na Onda Madrid. Na mgbakwunye, na -egosipụta ntinye aka ya na mmemme dị iche iche na redio na telivishọn, nke e nyerela ya n'oge dị iche iche. Ugbu a, ọ na -eduzi ma na -enye onyinye Madrid Direct site Madrid ife ma na -arụkọ ọrụ Oge elekere 1 Na ọwa 1
Kemgbe 2001, ọ na -ejikọ ọrụ nta akụkọ ya na akwụkwọ, ubi nke ọ rụpụtakwara ọrụ na -aga nke ọma. Site na mkpokọta akwụkwọ asatọ, onye edemede Spanish enwetala ọtụtụ narị ndị na -agụ akwụkwọ, ndị na -enwe obi ụtọ na akụkọ na -atọ ụtọ na nke pụrụ iche. Ọtụtụ n'ime ọrụ ya dabere na ya akụkọ ihe mere eme ejiri akụkọ ifo chọọ ya mma, n'etiti ha pụtara ìhè: Ihe anya ya na -ezo (2013).
N'oge ọrụ ya, a mara Nieves Herrero maka ibuli ụmụ nwanyị elu. N'ihi ya, ọtụtụ akụkọ ya bụ ụmụnwaanyị na -eme ya. N'otu aka ahụ, O dere maka akwụkwọ akụkọ El Mundo ihe karịrị 100 ajụjụ ọnụ a kpọrọ: "Naanị mụ na ha ...", nke emere ụfọdụ ụmụ nwanyị ama ama nke ọha obodo Spain.
Akwụkwọ ndị edemede
Ọnwa agbajiri (2001)
Ihe niile abụghị ihe ọ bụla, Leonor. A mụrụ eze nwanyị (2006)
Ana m ewepụ (2013)
Ụbọchị ndị ahụ na -acha anụnụ anụnụ (2019).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nieves Herrero: akwụkwọ